Indlu engasechibini laseBetsede, kufutshane nehlathi kunye nolwandle. - I-Airbnb
Indlu engasechibini laseBetsede, kufutshane nehlathi kunye nolwandle.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAnders
Indlu engasechibini laseBetsede
Indlu etofotofo kunye neyanamhlanje kwisiza sechibi kunye nokufikelela kwijethi yokuhlambela, isikhephe sokubheqa kunye nendlu yesauna ngasechibini. Ngokujikeleze iqhina unamanzi kunye nendalo. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nezixhobo zokupheka, ukuhlamba izitya, ifriji kunye nesikhenkcisi. Kwi-terrace kukho ibarbecue kunye nefenitshala ethandekayo yangaphandle ehlolwe kakuhle. Kumgangatho ophezulu yindawo yokulala kunye nendlu yangasese kunye neshawari. Izibane zesibhakabhaka apho unokubona khona imithi kusasa. Indawo yokuzonwabisa, indawo yokuqala kunye nendawo yokuphumla.
I-Värmdö yonke yiparadesi, iindawo ezinkulu zokuhamba, kufuphi nolwandle kunye neenqanawa ze-archipelago eziphuma kuyo yonke i-Stockholm archipelago. Uqhagamshelo oluhle ngebhasi ukuya edolophini, malunga nemizuzu engama-20. Ukuba ufuna ukuhlala eGustavsberg, kukho iindawo zokutyela kunye neekhefi ezantsi kwizibuko. Ukuba unomdla kwiglasi, une-Iittala kunye ne-Orrefors yokuphuma. Ukuba ungathanda ukuthenga i-porcelain kumzi-mveliso waseGustavsberg, nabo banendawo yokuphuma.
Indlu engasechibini laseBetsede Indlu etofotofo nekhoyo ngoku kwiplani yechibi enokufikelela kwijethi yokuhlambela, isikhephe sokubheqa kunye nendlu yesauna ngasechibini. Ngokujikeleze iqhina unamanzi kunye nendalo. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nezixhobo zokupheka, ukuhlamba izitya, ifriji kunye nesikhenkcisi. Kwi-terrace kukho ibarbecue kunye nefenitshala ethandekayo yangaphandle ehlolwe kakuhle. Kumgangatho ophezulu yindawo yokulala kunye nendlu yangasese kunye neshawari. Izibane zesibhakabhaka apho unokubona khona imithi kusasa. Indawo yokuzonwabisa, indawo yokuqala kunye nendawo yokuphumla.
Iibhayisekile ziyafumaneka ukuba ziqeshwe kwindawo.
Indlu engasechibini laseBetsede Indlu etofotofo nekhoyo ngoku kwiplani yechibi enokufikelela kwijethi yokuhlambela, isikhephe sokubheqa kunye nendlu yesauna ngasechibini. Ngokujike…